“Waxaan mooday in Ronaldo, Bale, Kroos iyo Fabregas ku soo biirayaan Man United.”. – Gool FM
“Waxaan mooday in Ronaldo, Bale, Kroos iyo Fabregas ku soo biirayaan Man United.”.
(Manchester) 24 Dis 2016. Tababarihii ku fashilmay Man United kaddib markii uu xilka ka badelay Sir Alex Ferguson ee David Moyes ayaa ku calaacalay inuu moodayay inuu la soo wareegi doono, Ronaldo, Bale, Kroos iyo Fabregas markii uu qabtay xilka Old Trafford.
10-bilood kaddib Man United ayaa ceyrisay Moyes, laakiin wuxuu macallinka reer Scottish aaminsanaa in xaalka uu sidaa ka badelnaan lahaa haddii uu la soo wareegi lahaa xiddigaha uu maanka ku hayay.
“Markii igu horreysay oo aan tagey, bartilmaameedkeyga dhabta ah wuxuu ahaa Gareth Bale. Waxaan gabi ahaan dareemayay in Bale uu yahay laacib Man United ah,” Moyes ayaa sidaa yiri.
“Waan dagaalamay ilaa daqiiqadii ugu dambeysay. Waxaan u bandhignay dalab ka wayn midka Real Madrid. Lakiin Bale waxaa maskaxdiisa ku qufulnayd Real Madrid, taas ayay ahad aniga maskaxdeyda ciyaaryahanka aan dhab ahaan doonayay inaan keeno Manchester United.
“Midka kale wuxuu ahaa Cesc Fabregas, kaa oo aan modnay inaan heli doonno tan iyo daqiiqadii ugu dambeysay.
“Waan xusuustaa markii ugu horreysay aan la kulmo Sir Alex Ferguson, wuxuuna had iyo jeer oran jiray. ‘Waxaa jirta fursad uu dib ugu soo laaban karo Cristiano Ronaldo.
“Sidaa darteed, taasi waxay ahayd heerka aan bartilmaameedsaneyno, uma socon inaan keeno todobo, sideed ciyaaryahan, maxaa yeelay waxaan heysanay shax ku guuleysatay horyaalka.
“Toni Kroos wuxuu ogolaaday inuu yimaado xagaaga, waxaan kala heshiiyay Kroos qudhiisa iyo wakiilkiisa.”.
AC Milan oo ku guulaysatay Super Cup-ka talyaaniga kadib markii ay garaacday Juventus + Sawirro
Man United oo dalab tababaranimo hor dhigeysa Zlatan Ibrahimovic